Adora & etc.: September 2013
ပင်ပန်းလွန်း၍ မှိတ်ထားသော မျက်လုံးအစုံကဖျတ်ခနဲပွင့်လာသည်။ အသံသွင်းထားသော အမျိုးသမီးကအခုရောက်နေသော မှတ်တိုင်ကို ထက်ခါထပ်ခါကြေငြာနေချင်းဖြစ်သည်။
အကျင့်ပါနေတဲ့မျက်လုံးတွေက ရထားပေါ်တက်လာသူတွေ၊ ဆင်းသွားသူတွေကြားဟိုဟိုဒီဒီ။ ဒါပေမဲ့ သူ့အလုပ်ကအိမ်နှင့်မဝေးလှတာမို့ ဒီလိုအချိန်သူရထားမစီးတတ်မှန်းလဲသိပြီးသား။ နှုတ်ခမ်းထောင့်ကကွေးရုံကွေးခါ မျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးမပီတပီ တခုပေါ်လာသည်။
"အင်းလေ မတော်တဆများ ရထားပေါ်သူတတ်လာခဲ့ရင် ငါနောက်တမှတ်တိုင်မှာ ဆင်းသွားမှာပဲဟာ"
ဒီလိုပဲ မာန်နဲ့ပတ်သက်ရင် စုရဲ့ခံစားချက်တွေက အစွန်းနှစ်ဘက်မှာ။
စုနဲ့သူသိတာ သူငယ်ချင်းတယောက်မိတ်ဆက်ပေးလို့ပါ။ တွေ့တွေ့ချင်း မျက်နှာခြင်းဆိုင်မကြည့်ရဲသဖြင့် ခေါင်းငုံ့ထားတုန်းက သတိထားမိတာ သူ့ရဲ့ခြေချောင်းဖြူဖြူတွေ။ အရပ်သိပ်မရှည်သော မာန့်မှာ ရုပ်ရှင်တွေထဲကမင်းသားတွေလို ခြေချောင်းရှည်ရှည်တွေတော့မရှိ။ သေသေချာချာ ပွတ်တိုက်ဆေးကျောထားမှန်းသိသာသော ရှင်းသန့်သည့်ခြေထောက်တစုံကိုတော့ ကတ္တီပါဖိနပ်တစုံနဲ့အတူတွဲမှတ်မိခဲ့သည်။ မထင်မှတ်စွာနဲ့ရင်းနီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်း နေ့နံပဲမကိုက်သလား၊ အကျင့်စရိုက်ပဲ ညှိမရအောင်ကွဲသလား မပြောနိုင် စကားများရန်ဖြစ်ကြတာက အကြိမ်ပေါင်းမနဲ။ ရန်ဖြစ်တိုင်း နောက်ဆုံးမှာနာကျင်ရတာ၊ ခဏခဏအဝေးကို ပြေးဖို့ကြိုးစားမိတာလဲစု။ သူစိတ်ပြေသွားချိန်မှာပို့လာတဲ့ စာတကြောင်း၊ ဖုံး ၁ခါခေါ်ရုံနဲ့ စိတ်နာတာတွေ ဝမ်းနည်းရတာတွေပြေတာကလဲ စုပါပဲ။
စုနဲ့မာန့်အကြောင်းကို သိတဲ့သူငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ပြောဘူးသည်။ "ဒီကောင်က ဘယ်အချိန်မှာ နင့်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲ၊ နင့်အကြောင်းနောကြေနေအောင် သိပီးသား။ ဒါကြောင့်နင်ပြေးမလွတ်တာ" တဲ့။ ဒီအကြောင်းသူ့ကိုပြန်ပြောတဲ့အခါသူက "အေး ဒီကောင်က နင့်ကိုကြိုက်နေလားမှမသိတာ။ ငါ့ကိုဘယ်အကောင်းပြောပါ့မလဲ" လို့ဘုတောလွှတ်သေးသည်။ မာန်တခါတခါ စိတ်ကြည်လို့ "Honey" လို့စုကိုခေါ်သောအခါ၊ သူ့အပြစ်တွေကို တစက်မှရှင်းမပြနိုင်ပဲ "ငါမှ နင့်ကိုမခေါ်ဘဲ မနေနိုင်တာ"ဟု အော်ဟစ်သောအခါ မာန်ဘာမှထပ်ပြောစရာမလိုအောင် စုစိတ်တွေ အလိုလိုညွတ်နူးသွားမှန်း သူငယ်ချင်းသိရင်တော့ စုကိုနားမလည်စွာနဲ့ လှောင်ရီလိမ့်မည်။
တခါ မာန်နဲ့စု ခလေးဆန်စွာရန်ဖြစ်ကြတာ Facebookက သူနဲ့သူ့ကောင်မလေးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို Like လုပ်မိခြင်းမှစသည်။။ (မာန်က ဘယ်ကောင်မလေးကိုမှ စုရှေ့မှာသူ့ကောင်မလေးလို့ ဝင်မခံ။ ဘယ်အချိန် ဘယ်အခါ ဘယ်လိုသက်သေတွေနဲ့မေးမေး မဟုတ်ဘူးပဲဖြေသည်။ သူ့ကောင်မလေးတွေကလဲ ပြောပဲမရတာလား၊ သဝန်ပဲမတိုတတ်သလား၊ သူပဲဘာပြောထားသလဲ မသိ။စုနဲ့ ၂ယောက်ထဲ ထမင်းစား ကော်ဖီသောက်ထွက်ခြင်းကို ဘယ်တော့မှမတား) ဓာတ်ပုံတွေကြည့်လို့မှ မပြီးသေးခင် စုဖုံးလေးတဖြတ်ဖြတ်နဲ့ လင်းလာသည်။ သေချာတယ် အဲဒါမာန်ပါပဲ။ ပုံတွေကလှပြီး အသက်ဝင်လို့ ငါ Like လုပ်မိတာလို့ မရေမရာ ဆင်ခြေပေးတော့ "အပိုတွေလာမပြောနဲ့စု။ နင်ဘာကိုဘာအချိုးနဲ့လုပ်သလဲဆိုတာ ငါသိပြီးသား။ ငါ့အကြောင်းတွေ နင်သိပါတယ်ဆိုတဲ့ စတိုင်မျိုးနဲ့ လာလုပ်နေတာ။ နောက်ဒါမျိုးထပ်မလုပ်နဲ့" ပြောပြီး အရင်ဖုံးချပြစ်ခဲ့သည်။
မာန်အပေါ် အစစအရာရာ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အရှုံးပေးနေသော်လဲ စုက ခပ်ထုံထုံ၊ခပ်တုံးတုံးမိန်းမတော့ မဟုတ်။ ကျောင်းတက်စဉ်ကရော၊ အလုပ်ခွင်မှာပါ ဆရာ၊ဆရာမတွေနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကပါ ထူးချွန်ထက်မြက်သူဟုသက်မှတ်ခံရသူ။ မာန်နဲ့ကြမှ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမခိုင်မာပဲ ပျော့ညံ့နေခဲ့တာ အချစ် သို့ ဝဋ်တမျိုးပင်ဖြစ်မည်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ ယုံကြည်ချက်တခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဟုတ်သည်။ စုသည် အနာဂါတ်တချိန်ချိန်တွင် မာန်နှင့်စုအတူမခွဲမခွါရှိကြလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်သည်။ မာန်သည်လဲ စုနှင့်တူတူ ထပ်တူထပ်မျှပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုအတွက် မာန်သည် စုကိုဘယ်တော့မှပစ်ပစ်ခါခါ လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်။ မာန်အကြောင်းကို စုအချိန်ပြည့်နီးပါးတွေးနေသလို မာန်လဲစုကို သတိရနေလိမ့်မည်။
မထင်မှတ်စွာပဲ မာန်၏စိတ်ထဲတွင် စုလုံးဝရှိမနေကြောင်းသိလိုက်ရသောအခါ တစစ်စစ်နာနေသောရင်ကိုဖိ၍ သည်းသည်းထန်ထန်ငိုမိသည်။ တခါမှမပြောဘူးသော စကားလုံးအကြမ်းများနှင့် ဖုံးပေါက်ကွဲမတတ် အော်ဟစ်ပြစ်ခဲ့သည်။ မာန်၏ စကားလုံးများသည် ငါနှင့်စ၍ ငါနှင့်ဆုံးသည်ကို စုရင်နာလှသည်။ စုက သူ့ကိုလိုက်ပတ်သက်ပါသည်ဟု စွပ်စွဲသောအခါ၊ စုအပေါ်တွင် သူလုပ်ပေးဖူးသောအကြောင်းအရာများကို ပြန်ပြောသောအခါ မာန်မမြင်ရမှန်းသိပါရက်နှင့် ခေါင်းကို တွင်တွင်ခါရမ်းပစ်မိသည်။ "စုကရော မာန်ကိုဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ် မာန်လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်း ဘယ်လိုဘေးနားမှာရှိပေးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေပြန်ပြောရအုံးမလား" လို့မေးတော့ မာန်ခေါင်းမာစွာနဲ့ နှုတ်ပိတ်နေလေသည်။
"ငါရှင်းစရာရှိတာတွေ အကုန်ရှင်းပြီးပြီ။ နင် ငါ့ကိုထပ်ပြီးအာရုံတွေလာမစားပါနဲ့တော့" လို့ နဖူးပေါ်တွင်ဝဲကြနေသော ဆံပင်ပျော့ပျော့တွေကို သပ်တင်ပြီး မာန်ပြောသောအခါ စုသူ့အမူအရာတွေကို မျက်နှာလွှဲတတ်ခဲ့ပြီ။ စုဘဝထဲကနေလည်း အပြီးအပိုင်ထွက်သွားပါတော့ လို့မျက်နှာကိုမှ မကြည့်ဘဲ ပြောဖြစ်ခဲ့သည်။ မာန်သည် စုကိုချစ်သော၊ စုအပေါ်ကြင်နာသော၊ စုအပေါ်တွင် အကိုတယောက်ပမာကာကွယ်ပေးတတ်သော၊ အစစအရာရာ နားလည်ပေးတတ်သော စုသိပ်ချစ်ရသည့်မာန်မဟုတ်တော့။ သေသေချာချာပြန်တွေးကြည့်တော့ မာန်ပြောင်းလဲတာတွေ တရေးရေးပြန်မြင်သည်။ စုကသာ စုကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးထဲကနေ အပြောင်းအလဲတွေကိုမြင်အောင် မကြည့်တတ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်မက်မက်နေသူကို ရေခဲရေနှင့် မျက်နှာကိုပက်ပြီးနှိုးခံရသူလို စပ်ဖြင်းဖြင်းနှင့် လက်ရှိအခြေအနေကို အိတ်ချင်မူးတူးနှင့် စုပြန်ရောက် ခဲ့ပြီ။ လက်ရှိတွင် မာန်သည် စုသိသော ချစ်စရာကောင်လေးမဟုတ်တော့။ စုကတော့စုပင်ဖြစ်သည်။
မာန့်ကို စုရင်ထဲတွင် မေ့ဖျောက်၍ရချင်မှရမည်။ ဒါပေမဲ့ မာန်သည် စု၏အတိတ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထက်မြက်လိမ္မာသောစု၏ အနာဂတ်၊ စု၏ပျော်ရွှင်မှုသည် စုနှင့်သာဆိုင်လေတော့သည်။
Posted by Adora etc. at 05:57 1 comment:
ဒီတလောတနေ့တခြားတိုးပွါးလာပြီး တခါတလေလုံးဝနားမလည်အောင်ဖြစ်လာတာက ဖက်ရှင်ဘာသာစကား ဒါမှမဟုတ် ဗန်းစကား။
လွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်ကျော် ဒီနိုင်ငံရောက်စက ကိုယ်သိတာ ဂါဝန်၊စကပ်၊ဘောင်းဘီနဲ့ အင်္ကျီ။ ဖိနပ်ဆိုရင် လေဒီရှူး၊ ဒေါက်မြင့်၊ ကြိုးသိုင်း၊ ဝေါကင်းရှူးနဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူဘဝကနေခုချိန်ထိနှစ်သက်မြတ်နိုးနေဆဲ ပုံတော်ဖိနပ်။ လေဒီရှူးဆိုတာ ထိပ်ပိတ်နောက်ပိတ်၊ ကျောင်းသူအရွယ်တွေအများဆုံးစီးတဲ့ ဖိနပ်ကိုခေါ်တာ၊ ဒေါက်မြင့်ကတော့အပျိုအရွယ်ကနေ အန်တီငယ်ငယ်တွေစီးတဲ့ ဒေါက်အမြင့်နဲ့ဖိနပ်ပေါ့၊ ကြိုးသိုင်းက ကြိုးတွေသိုင်းထားတဲ့ဟာ (ရှင်းသွားတာပဲနော်)၊ ဝေါကင်းရှူးကတော့ အားကစားဖိနပ်ပါပဲ။ အောကျန်သေးတယ် ဟတ်ဖ်ရှူး၊ နောက်ပိတ်မပါတဲ့ ဖိနပ်။ ပုံတော်ကတော့ မိတ်ဆက်စရာလိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်။
ကျောင်းတက်တုံးက မိဘပေးတဲ့မုန့်ဖိုးနဲ့ဆိုတော့ခုလောက် ရှော့ပင်တွေဂတီး၊ဂတီးမထွက်သေး။ အိမ်နဲ့နီးတဲ့ ရှော့ပင်းစင်တာက ဆိုင်တွေလိုက်ငေး။ အဲဒီတုန်းက tampines mrt ကထွက်ရင် push cardတွေနဲ့ရောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးတွေက ဈေးသင့်တဲ့ တီရှပ်လေးတွေ၊ စကပ်လေးတွေဝယ်နဲ့ ဒီတော့မှစကြားဖူးတာက Spaghetti Strap။ လက်ကကြိုးလုံးလေးတွေက စပက်ဂတီခေါက်ဆွဲတွေနဲ့ဆင်တာကိုအစွဲပြုပြီး ခေါ်တဲ့ ဗမာလို ကြိုးတချောင်း ဒါမှမဟုတ် ကြိုးတလုံး အင်္ကျီ။ပထမဆုံးတတ်တဲ့ ဖက်ရှင်ဘာသာစကားအဖြစ်မှတ်တန်းတင်။
Spaghetti Strap - A Spaghetti Strap isavery thin shoulder strap used in clothing, such as camisoles, crop tops, cocktail dresses, and evening gowns, so-named for its resemblance to the thin pasta strings called spaghetti.
အရင်ရုံးမှာအတူတူအလုပ်လုပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းကဒေါက်မြင့်ဖိနပ်နှစ်သက်သူ။ ကျမကလဲ ဖိနပ်ရူးဆိုတော့ ရုံးမှာအလုပ်ပါးချိန်၊ ကော်ဖီချိန်တွေဆို လေပေးဖြောင့်လို့။တခါတလေ အိပ်ရာထနောက်ကျလို့ ရုံးချိန်အမှီပြေးရတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ဖိနပ်အမြင့်နဲ့အဆင်မပြေလှကြောင်းပြောရင်း သူက "ငါတော့ ဒီတခေါက် ဖိနပ်ဆိုင်ရောက်ရင် ခုခေတ်စားနေတဲ့ Wedges Heels ဝယ်စီးမလားလို့။ လမ်းလျှောက်ရတာပိုကောင်းတယ်" ကိုယ်သိတာ Wedges ဆိုရင် Potatoes Wedges ပဲရှိတော့ ဘေးကနေ အိယောင်ဝါးနဲ့ "အင်း" ပေါ့။ နောက်တယောက်က ဝင်ပြောတယ်။ "Platform Heel" လဲမဆိုးပါဘူး စီးလို့ကောင်းတယ်တဲ့။ လာပြန်ပြီဟဲ့ နောက်တလုံး။ ဘယ်ရမလဲ အဲဒီနေ့က အိမ်ပြန်ရောက်တော့ google ထဲမှာ Wedges Heel Platform Heel ရိုက်ထဲ့ ရှာပြီး ပုံတွေတွေ့တော့ "အော ဒါမျိုး" ပေါ့။
Wedges Heel- A heel where the space under the foot is filled in, giving the appearance ofatriangle “wedge” under the arch and heel of the foot when viewed from the side; not to be confused with the “Platform Heel” which refers toathickened sole under the ball of the foot.
ခုမှစပြီး ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးမယ်ဆိုရင် Kitten Heel ကိုစပြီးစီးဖို့ အင်တာနက်နဲ့ YouTubeပေါ်က ဖက်ရှင်ဂုရုတွေကအကြံပေးထားသေးတယ်။ အင်း ကြောင်ပေါက်စလေးတွေရဲ့ ဖိနပ်။ အန် သူတို့ကဖိနပ်မှမစီးပဲ။ googleမှာ ထပ်ရှာတယ် ထပ်တွေ့တယ်။ ၂လက်မထက်နိမ့်တဲ့နိမ့်တဲ့ ဖိနပ်ကိုခေါ်တာကိုး။ ဒါဆို ၂လက်ထက်မြင့်ရင်ရော။ဟင် ဒါကျ "Stiletto" တဲ့။ Cat Heel ဖြစ်ရမှာ။အနိမ့်ကျ Kitten Heel ခေါ်ပြီး.. ထားပါတော့လေ။
Kitten Heel- A short but narrow heel; less than 2″ withadiameter of no more than 0.4″ (1cm) where it reaches the ground.
Stiletto Heel- A heel that is long, narrow, 2″ and above withadiameter of no more than 0.4″ (1cm) where it reaches the ground; generally round or square shaped.
သိပ်မကြာသေးဘူး။ Facebook မှာကောင်မလေးတယောက်က ငွေရောင်ဒေါက်မြင့်ကြိုးသိုင်းဖိနပ်ပုံလေးတင်လာတယ်။ ကျမတို့ မိန်းကလေးတွေ တခဲနက် လက်မထောင်ပြီးအားပေးကြတာပေါ့။ တယောက်ကရေးတယ်။
"I love your sandal" တဲ့။ နောက်တယောက်က ပြန်ရေးတယ်။
"No. This is not sandal။This isapair of heels" တဲ့။ အရင်ကောင်မလေးက ပြန်ရေးတယ်။
"Aww ok" တဲ့။ အသံက အီလည်လည်နဲ့။ (ကိုယ်ထင်တာ ကိုယ်ပြောတာပါ။ :D)
အင်း ရှုပ်တော့ရှုပ်ကုန်ပြီ။ လက်က ဒီတခေါက် မီးမြေခွေးကို ခိုင်းလိုက်တယ်။ ဒီလိုတွေ့တယ်။
Sandal- A shoe where the upper portion consists of one or more straps running over the foot and is more open in design then other shoe.
အနိမ့်အမြင့် ဘာမှမပါ။ ဗမာလိုလွယ်လွယ်ပြောရရင် ကြိုးသိုင်းဖိနပ်။ သေချာအောင် ဓာတ်ပုံတွေကြည့်တော့ အများအားဖြင့် ဖိနပ်အပါးတွေ။ ရုံးက Politics ကောင်းတဲ့ ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ်တွေလိုပြောရရင် ပထမတယောက်က Techically မှန်ပြီးတော့ ဒုတိယတယောက်က ယေဘူရ (Generally) မှန်တယ်ပေါ့နော်။နေဦး၊ နေဦး လေဒီရှူးလို ဖိနပ်အပိတ်ကြိုးသိုင်းလေး ပါတာကျတော့ တမျိုး။ "Mary Jane" တဲ့။
Mary Jane- A “Mary Jane” isashoe very similar toa“pump” with an additional strap running horizontally across the middle of the foot from one side to the other, usually closed withabuckle.
ရုံးအားရက်တရက်အိမ်မှာ Fashion Police ဆိုတဲ့ TV Program တခုကြည့်နေတုန်း "ဂျီး" လို့ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ ဂျူလီယာနာက ဆယ်လယ်ဗရစ်တီတယောက်ရဲ့ ၀တ်စုံကိုကြည့်ပြီး "This is so Avant Garde" တဲ့။ ဘေးကအတူထိုင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုမေးဖို့ကြံရုံရှိသေး သူကအရင်ဦးသွားပါတယ်။
"ဟဲ့ အာဗန်ဂတေး ဆိုတာ ဘာတုန်း"
ကိုယ်ကတခုခုဆို ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်ရှိတတ်လို့ အထင်တကြီးနဲ့မေးတာကို ဟန်ကိုဖို့ရင်း
" အင်း....... အီတာလျံ စကားထင်တယ်။"
ဂျီးက အီတာလျံလူမျီူးဖြစ်တာမို့ ထင်သလိုရမ်းတုတ်လိုက်တာပါ။ သူငယ်ချင်းက အားနာလို့ပဲလား ဘာတွေသဘောပေါက်သွားလည်းမသိ ထပ်မမေးပါဘူး။ ကျမရဲ့လက်ဆွဲတော် Google လေးနဲ့ သွားကြည့်တော့မှ ... လားလားမှမဆိုင်ပါတကား။ Avant Garde ဆိုတာပြင်သစ်စကား အများနဲ့မတူ ထူးထူးခြားခြားရှိတဲ့ ဒီဇိုင်းကိုခေါ်တာ။
Avant-garde in fashion is actually to make clothing that not only looks unusual, but works or fits inadifferent way to normal clothing, and the overall image and how it is combined with other parts of an overall outfit will beabig part of the image that is portrayed.
နောက်တခုက Haute couture။ ဆယ်လယ်ဗရစ်တီတွေ ကော်ဇောနီခင်းတဲ့ပွဲတွေတက်တဲ့အခါ ဝတ်တဲ့ တချို့ညနေခင်းဝတ်စုံတွေကို Haute coutureလို့ပြောကြပါတယ်။ ကျမထင်တာက ကိုယ်မသိတဲ့ ဟောလီးဝုတ်က နာမည်ကြီး ဒီဇိုင်းနာပေါ့လေ။ မှတ်မှတ်ရရ ဒီအကြောင်းဆွေးနွေးတုန်းက ရုံးကနေ့လည်စာစားချိန်မှာ။ Haute couture ဆိုတာ ဝတ်မဲ့သူအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ဒီဇိုင်းနာက ချုတ်ပေးတဲ့ ဝတ်စုံလဲဆိုရော "ဟယ် ဒါဆိုငါတော့ဝတ်နေတဲ့ မြန်မာရိုးရာဝတ်စုံတွေအားလုံးက Haute couture ပေါ့။" ဟုတ်တယ်လေ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပိတ်စနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံစံကို အပ်ချုပ်ဆိုင်သွားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်းနဲ့ချုပ်ခိုင်းတာ ဒီထပ် Haute couture ကြတာဘာရှိမတုန်း။
Haute couture - exclusive clothes, often individually designed and customised for private clients. Haute couture is often used to describe the work of top fashion designers but, strictly speaking, the term applies to onlyahandful of Paris fashion houses.
လွန်ခဲ့တဲ့၎၊၅လလောက်ကတော့ စင်ကာပူမှာခေတ်စားလိုက်ပါတဲ့ Peplum။ ဟိုနေရာသွားလည်း peplum၊ ဒီနေရာသွားလည်း Peplum။ ဒီနိုင်ငံက တရုတ်မ ပိန်ပိန်လေးတွေ peplum နဲ့ကိုယ်လုံးတွေလှသွားလိုက်တာများ။ peplum ဆိုတာ ခါးကနေ တင်ရိုးပေါ်ကိုကားသွားတဲ့ အကျီပုံစံ။ ခါးလေးသေးသွားသလိုမျီူး ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီတခါလဲကျမကို သင်ခန်းစာပေးသွားတာ ဆိုင်က၀န်ထမ်းအမျီူးသမီးပါပဲ။ ဒါကအခုခေတ်စားနေတဲ့ peplum ဆိုတော့ အူကြောင်ကြေင်ပြန်ကြည့်နေတဲ့ကျမကို အကျီယူလာပြပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေခါးပေါ်မှာ ဒါမျီူးတွေ့နေ၊ မြင်နေပေမယ့် အခေါ်အဝေါ်မှမသိတာကို။
Peplum -A ruffle attached to the waistline ofaskirt oradress. Super cute and hides flaws.
Peplumတွေဘယ်လောက်ပေါ်ပေါ် ကျမစိတ်ဝင်စားနေတာက Bandage Dress ပါ။ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်တော့ ပတ်တီးများနှင်ပြုလုပ်ထားသောဂါဝန်။ အီဂျစ်က မမ်မီရုပ်ကြီးတွေမြင်ယောင်ကုန်ကြပြီမှတ်လား။ (နည်းနည်း တော့တူပါတယ်။ :D) ပတ်တီးစ ၁ လက်မအရွယ်အပြားလေးတွေနဲ့ကပ်ချူပ်ထားတဲ့ ပုံစံမျီူးနဲ့ဆင်ပါတယ်။ ဒီ ဒီဇိုင်းကလဲ ၀တဲ့သူရော၊ ပိန်တဲ့သူပါ နှစ်သက်တဲ့ပုံမျီူး။ အကျီအသားကတော်တော်ထူတာဆိုတော. ခနွာကိုယ်ပေါ်မှာ မလိုပဲပိုနေတာတွေကို ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်သွားစေတယ်လေ။ သူငယ်ချင်းတယောက်ကဆ်ုအမြဲ စပါတယ်။ နင်တို့မိန်းကလေးတွေ မမ်မီသရဲတော့ကြောက်ကျတယ်။ ဒါပေမယ့် မမ်မီနဲ့တူမှာတော့မကြောက်ကြဘူးတဲ့။
Bandage Dress -A dress made of horizontal stripes of elasticy material that makes you feel likeasausage, but inasexy way.
Fashion magazine တခုမှာဖတ်လိုက်ရတယ်။ Grunge ဖက်ရှင်တွေပြန်ခေတ်စားနေပြီတဲ့။ လာပြန်ပီလား။ ကိုယ်သိတဲ့ Grunge က မြူးဇစ်တမျီူးပါ။ ဘယ်လိုလုပ် ဖက်ရှင်ဖြစ်သွားပါလိမ့်။ ခုတခါတော့ လက်စွဲတော် google နဲ့တန်းမရှာပဲ ဦးရှံစားလိုတွေးကြည့်လိုက်တော့ထူးထူးခြားခြားမှန်သွားပါတယ်။ Grunge ဂီတသမားတွေဝတ်တဲ့ သားရေဂျက်ကက်တွေ၊ အနားဖွာနေသော၊ stone wash, acid wash လုပ်ထားပြီး အရောင်မှိန်နေတဲ့ ဂျင်းတွေ၊ ဖလန်ထည်အကျီတွေ၊ သံတွေကပ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီ၊ အပေါ်ထပ် လက်ပြတ်ခါးတို ပုံစံမျိူးတွေပါ။ မနေနိုင်စွာနဲ့ အင်တာနက်မှာ ရှာကြည့်တော့ ဒီမှတ်ချက်လေးဖတ်ရပါတယ်။
"Grunge fashion ဆိုတာ အိမ်ထဲကနေ ၀တ်ကောင်းစားလှတွေဝတ်ပြီး အပြင်ထွက်အလာ တယောက်ယောက်က ဂိုထောင်ထဲကို တရွတ်တိုက် ဆွဲခေါ်သွားတာခံရပြီး ပြန်ထွက်လာတာနဲ့တူပါတယ်" တဲ့။ ဂိုထောင်ထဲကို တရွတ်တိုက်ဆွဲတာခံရတော့ ဖုံတွေပေ၊ အကျီ ဘောင်းဘီအောက်နားတွေ ဖွာလန်ကြဲ၊ တစေ့စေ့တွေးပြီးတရေးရေး မျက်စိထဲပေါ်ပါတယ်။
"This trend had it's greatest moment in the 90's, and I kind of like it and kind of hate it, it looks like you got dressed then got dragged throughawarehouse by friends before going out. Think distressed denim, plaid shirts, leather jackets, Doc Martens, beanies and smokey eyes."
ဖက်ရှင်ဆိုတာ အနုပညာတခုပဲမို့ တီထွင်ဖန်တီးသူ ဖန်တီးနိင်သမျှတော့ ဒီဇိုင်းအသစ်အဆန်းတွေ၊ ထွက်လာတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စကားလုံးအသစ်အဆန်းတွေတခုပြီးတခုထွက်လာအုံးမှာပါပဲ။ အကျီအ၀တ်အစားသာမက ဖက်ရှင် accessories တွေမှာပါ ကိုယ်မသိတဲ့ နာမည်တွေအမျီူးမျီူး။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအဖို့တော့ အားလပ်ချိန်တွေမှာ ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်ဖတ်ရင်း အပျင်းလဲပြေ၊ ဗဟုသုတလဲရပေါ့။
ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ အသစ်မတင်ဖြစ်တာလဲ နည်းနည်း ကြာသွားပြီဆိုတော့ စိတ်ထဲမှာရှိတာလေးတွေပေါ့ပေါ့ပါးပါး ချရေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Adora etc. at 19:04 No comments:
Peranakan Baba Nyonyas ဆိုရင် အရင်ကတရုတ်လူမျိုးနဲ့မလေးလူမျိူး ပေါင်းစပ်ရာကဖြစ်လာတယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ တကယ်က အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ပင်နီဆူလာမလေးရှား ဘက်ကို ရေကြည်ရာ မြက်နုရာပြောင်းလာတဲ့ တရုတ်လူမျိူးတွေရဲ့ အဆက်အနွယ်တွေပါပဲ။ တရုတ်အဆက်အနွယ်တွေဖြစ်တာကြောင့် တရုတ်စကားပြောတတ်တဲ့ အပြင် နယ်ခံတွေရဲ့ဘာသာစကားတွေနဲ့ English ဘာသာကိုပါ ကျွမ်းကျင်တာမို့ အများစုက ကုန်သည်အလုပ်နဲ့အသက်မွေးပါတယ်။ Englishလူမျိုး တရုတ်လူမျိုးနဲ့ နယ်ခံမလေး၊အင်ဒိုလူမျိုးတွေကြားသူတို့ကလွယ်လွယ်ပြောရရင်ပွဲစားပါပဲ။
Peranakan တွေရဲ့အယူ၊ အလေ့အထတွေက တရုတ်လူမျိူးတွေနဲ့ဆင်တူပေမယ့် အမျိူးသမီးတွေရဲ့အ၀တ်အစားနဲ့ အစားအစာပုံစံတွေကျတော့ နယ်ခံမလေးလူမျိူးတွေနဲ့တူပါတယ်။
အိမ်နောက်ဘက်က Praying Hall
"Baju Kurung" လို့ခေါ်တဲ့ ညိုညအမျိုးသမီးဝတ်စုံ
ညိုည အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဝတ်စုံက မလေးအမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရိုးရာဝတ်စုံနဲ့တူတူပါပဲ။ စကတ်အရှည်ပေါ်မှာ ခြေသလုံးတဝက်ထိအရှည် အပေါ်အကျီလက်ရှည်နဲ့ပါ။ ကော်လာမပါတဲ့ ရိုးရိုးအကျီပုံစံပေါ်မှာမှ ရွှေကြယ်သီး အမျိုးမျိုး၊ ဆွဲကြိုး၊ ရင်ထိုးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဝတ်ကြတာဆိုတော့အကျီပုံစံ တမင်ရိုးထားသလားတောင် ထင်ရပါတယ်။ "အိမ်ထောင်ကျပီးဖြစ်တဲ့ ညိုညအမျိုးသမီးတွေဟာ အရောင်တမျိုးထဲကိုပဲ တနှစ်ပတ်လုံးဝတ်ဆင်ရပါတယ်။ ပထမနှစ်က မီးခိုးရောင်ပါ" လို့လဲ ဝန်ထမ်းတယောက်ကရှင်းပြရော ကျမမျက်နှာကြီး ရှုံ့မဲ့သွားတာများ.. The Little Nyonya ကြည့်ပြီးကတည်းက Nyonya ယဉ်ကျေးမှု၊ အဝတ်အစားနဲ့အသုံးအဆောင်တွေကို ကျမသဘောကျနေမှန်း သိနေတဲ့ အတူလိုက်လာတဲ့သူငယ်ချင်းက စပါတယ်။
"နင်ညိုည ယဉ်ကျေးမှု၊ အဝတ်အစားတွေကို ကြိုက်တယ်ဆို" တဲ့..
မိန်းမတွေကို ဟိုဟာပဲဝတ်ရမယ် ဒါမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ ချုပ်ခြယ်တာမျိုးကိုမကြိုက်တာက တမျိုး၊ ပြီးတော့ ညားခါစလင်မယား ချစ်ချစ်ခင်ခင်၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်၊ လှလှပပနေရမဲ့ဟာကို... ဘယ့်နှယ် ဒီအရောင်မှိုင်းမှိုင်းကြီးကိုမှ တနှစ်ပတ်လုံး အတင်းဝတ်ခိုင်းရတယ်လို့။ သတို့သမီးက ကြိုက်နှစ်သက်တာဆိုတမျိုးပေါ့။
"ဟင့်အင်း မြန်မာပဲလုပ်တော့မယ်" လို့ ခပ်သွက်သွက်လေး ပြန်ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။
တခြားမူကွဲ ဝတ်စုံတမျိုးကတော့ Kebayaပါ။ Kebayaကို အင်ဒိုနီးရှားက ညိုညတွေဝတ်ကြပါတယ်။ ပါတိတ်လုံချည်နဲ့တွဲဝတ်တာပါ။ ပိုပြီးခေတ်မှီလှပတဲ့ ရိုးရာဝတ်စုံပါ။ မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ တော်တော်ကြီးကိုတူပါတယ်။ အကျီရှေ့မှာ ပန်းတွေကို ချည်ရောင်စုံနဲ့လှအောင်ထိုးထားတာဆိုတော့ Kebaya တထည်၊ တထည်ကို တော်တော်ဈေးကြီးပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မရှိမဖြစ် (handmade) ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်များ
သတို့သမီးအတွက် ဆံထိုးတွေ (ဒါက Touristsတွေကို ဆံထိုးမျိုးစုံပြချင်လို့ စုံနေအောင်ထိုးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဧည့်ခံပွဲမှာ သတို့သမီးရဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်း၊ ပြည့်စုံကုံလုံမှုကိုပြဖို့ ဒီလိုအများကြီးထိုးရပါတယ်။)
ပုံမှန်အားဖြင့်တို့ ပြည့်စုံတဲ့ Peranakan အိမ်တအိမ်ရဲ့အသုံးအဆောင်တွေကရွှေတွေချည်းပါ။ ကန့်လကာချိတ်လဲ ရွှေ၊ ပန်းနံ့သာထည့်တဲ့အိုးကလဲရွှေ၊ နားဖာကလော်၊ သွားကြားထိုးတံကအစရွှေဆိုတော့ ကျမတို့လိုပဲအလည်လာတဲ့ အမျိုးသားတယောက်က မှတ်ချက်ချပါတယ်။ "အရင်က ရွှေကတော်တော်ဈေးပေါရမယ်" တဲ့။ ကျမတို့သိတဲ့အတိုင်း ရွှေဆိုတာမျိုးကအစဉ်အဆက် ဘယ်တုံးကများပေါဖူးလို့လဲ။ အရင်က ခုခေတ်လောက်မရှားရင် နေမယ်၊ တန်ဖိုးတော့ရှိမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပစည်းတခုကို လိုတာထက်ပိုပြီးပေါပေါများများ မြင်ရတဲ့အခါ ပစည်းတန်ဖိုးက စိတ်ထဲမှာအလိုလို လျော့သွားတတ်ကြပါလားလို့ ဖျတ်ခနဲတွေးလိုက်မိတယ်။
တခြား အိမ်မီးဖိုချောင်အသုံးအဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ပန်းကန် ခွက်ယောက်တွေကိုတော့ ထမင်းတည့်ခင်းမဲ့ ဧည့်သည်ပေါ်မှာမူတည်ပြီး ပြင်ဆင်လေ့ရှိပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံက ကုန်သည်တွေအတွက်ထမင်းစားပွဲကို အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ဇွန်း၊ခရင်း၊ဓား၊ ဝိုင် အရက်အစုံအလင်နဲ့ England ကလုပ်တဲ့ ပန်းကန်များနဲ့တည့်ခင်းပါတယ်။ရှေးခေတ် တရုတ်ပြည်ဖြစ် ပန်းကန်အထူတွေကိုလဲ ပြထားပါတယ်။ Wedding ဆိုရင် သုံးရတဲ့ ပန်းကန်အမျိုးအစားက နောက်ထပ်တမျိုးပါ။ Wedding အတွက် သုံးတဲ့ ပန်းကန်တွေကိုပုံမှန်အချိန်တွေမှာသုံးလေ့မရှိပါဘူး။ကျမလို သမီးတယောက်ထဲရှိတဲ့ အိမ်ဆိုရင်တော့ ဒီပန်းကန်တွေ တခါသုံးပြီး ချောင်ထိုးထားရမှာပါပဲ။ နှမျောစရာကြီးနော်။
ဒါက Wedding မှာသုံးတဲ့ ပန်းကန်ပါ။ ဖီးနစ်ငှက်က သားသမီးတိုးပွါးစေပြီး အိမ်ထောင်ရေးကံကောင်းစေတယ်လို့ အယူရှိပါတယ်။
Peranakan Baba Nyonyas တွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ အသုံးအဆောင်တွေကို ကြည့်ရင် တခြားအရှေ့တောင်အာရှက လူမျိုးစုတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ အသုံးအဆောင်တွေ နဲ့နဲနဲစီရောနေတယ်လို့ ကျမတော့မြင်ပါတယ်။ ပီနန်ကျွန်းကို အလည်ရောက်လို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ သွားကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ကျမနဲ့ Blog ပေါ်ကနေပြီး Penang Peranakan Mansion ကိုအတူလိုက်လည်တဲ့သူတွေကကိုလဲ အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
Posted by Adora etc. at 09:473comments: